Ciidamada DF oo fashiliyay Baabuur ismiidaamin loo diyaariyay | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada DF oo fashiliyay Baabuur ismiidaamin loo diyaariyay
Ciidamada ayaa fashiliyay labo baabuur oo qaraxyo lagu rakibay, kuwaas oo ku wajahnaa Kismaayo, iyo 18 Miino ay ka soo saareen hareeraha waddooyinka Jannaa Cabdalla.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa fashiliyay gawaari walxaha qarxa lagu soo rakibay, kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Kismaayo iyo raggii la socday.
Qoraal ka soo baxay taliska Milateriga Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gaari Suksuuka ah oo medabkiisu yahay Madow oo ay Al-Shabaab walxaha qarxa ka soo buuxiyeen lagu qabtay deegaanka Jannaa Cabdalla oo ciidamada dowladda dhawaan dagaal aan dhiig ku daadan ku qabsadeen.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in iyana la qabtay gaari Hoomey ah oo lagu raray waxyaabaha qarxa iyo ninkii la socday, waxeyna ciidamada sheegeen in dhamaan qarxyadii baabuurta saarnaa la bur buriyay.
Dhinaca kale ciidamada ayaa sheegay in ay deegaanka Jannaa Cabdalle ka soo saareen 24 saac ay gacanta ku hayeen 18 Miino oo Al-Shabaab ay ku aaseen hareeraha waddooyinka, taasoo ugu tala galeen in ay ciidamada ku bar tilmaameedsadaan.
Ugu dambeyntii Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in ay bur buriyeen Ceel biyoodyadii deegaanka, iyagoona Matiiradii Ceelasha baabuur ku rartay.
Warar 27 November 2020 8:47
Farmaajo wuxuu doonayaa in Kumanaan qof u laayo jacaylka uu u qabo kursiga dartiis.